Maxaa ka soo kordhay dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya? – AfmoNews
Maxaa ka soo kordhay dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya?
Dagaalada ka socda Gobolka Tigreyga ee Waqooyiga Itoobiya oo xaalado kala duwan abuuray ayaa waxaa xilligan soo baxaya warar sheegaya in cuno yari, ay ku keentay gobolkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in quutul daruuriga uu gabaabsi ku yahay gobolkaasi, ka dib markii ay si weyn u go’doomiyeen Ciidamada Militariga.
Waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in shidaalka qudhiisu uu gabaabsi ku yahay gobolkaasi, taasoo sii adkayn doonto in dagaalka ay sii wadaan xoogaga u daacadda ah Maamulka Tigreyga.
Xafiiska Iskuduwahada Arrimaha Bani’aadanimada ee Qaramada Midoobey (OCHA) ayaa sheegay in saadka gargaarka ee gurmadka deg-degga uu gabaabsi ka sii noqonayo Gobolka Tigreyga.
OCHA ayaa Dowladda Itoobiya ku eedeysay inay u diiday in shaqaale iyo gargaarba u diraan gobolkaasi, si wax looga qabto arrimaha bani’aadanimo ee ka jira.
OCHA ayaa Xukuumadda Abiy Ahmed ugu baaqday in dadka ka cararaya dagaalada loo fududeeyo inay halkaasi isaga baxaan, si looga fogaado waxyeelo ka soo gaarta dagaalka amaba inay macluul ugu dhintaan gobolkaasi. Afartan kun oo qof oo keliya ayaa la sheegay in illaa iyo hadda, ay u suurtagashay inay ka cararaan dagaalada, ayna gaareen dalka Suudaan. Waana tiro aad yar intii la qiyaasaayay in bilowga dagaalada ay ku barakici doonaan.
Dhanka kale Dowladda Emirate-ka Carabta oo xiriir dhow la leh Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ayaa bilowday dadaalo, ay ku dooneyso in lagu joojiyo colaadda ka jirta Gobolka Tigreyga.
Xukuumadda Abu Dhabi ayaa sheegtay in ay ka shaqeynayso xal u helidda dagaalada saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay ka socday Waqooyiga Itoobiya.
Tani ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli saacado kooban ay ka harsan tahay mudada loo qabtay inay isu soo dhiibaan Hoggaanka Maamulka Tigreyga, inkastoo ay ka biyo diideen inay isa soo dhiibaan.
Hoggaamiyaha Maamulka Tigreyga, Debretsion Gebremichael ayaa si cad u sheegay inaanay isu dhiibi doonin Dowladda Federaalka, taasi bedelkeedana ay door bidayaan inay dagaalka sii wadaan, illaa iyo marka ugu dambeyso.
Taliska Militariga Itoobiya ayaa sheegay inay ku dhaqaaqi doonaan qabashada Magaalada Mekelle ee Xarunta Maamulka Tigreyga, marka la gaaro mudada loo qabtay.